संस्करण 0.9.6.0 – लामो अपेक्षित, छोटो दिन मा जारी
डिसेम्बर 21, 2014 द्वारा Ofer एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो संस्करण गुगल अनुवाद नयाँ दस भाषा हाल थप गरेको छ अझै यसो भन्छन्. रिलीज अन्तिम वर्ष मा Transposh घुसेका छन् भनेर चेतावनी र बग लडने मा केन्द्रित.
एक आफैलाई यस्तो प्रश्न सोध्नु सक्छ, सफ्टवेयर परिवर्तन छैन भने, कसरी bugs मा व्याप्त छन् आउछ? कि जवाफ सरल छ, सफ्टवेयर निर्वात मा अवस्थित छैन, कुरा सबै समय परिवर्तन, PHP को नयाँ संस्करण केही प्रयोगकर्ताका विचलित जो सख्त चेतावनी जोडी, WordPress र अन्य सफ्टवेयर घटक को लागि नयाँ विज्ञप्तिको थिए, साथै सर्वशक्तिमान गुगल अनुवाद इन्जिन परिवर्तन रूपमा. ती परिवर्तनहरू वर्तमान कोड ह्यान्डल गर्न सक्षम थिएन कि अवस्थामा सिर्जना, तर हामी यस नयाँ संस्करण गर्दै एक बिट बढी सक्षम हुनेछ इच्छा.
अन्य नयाँ सामान Yoast एसईओ साईटम्यापहरू एकीकरण समावेश (तपाईं यो पैच आवश्यकता, निर्देशन हाम्रो कोड छन्).
एउटा सानो सुविधा बेकारी स्वत अनुवाद हटाउन (अनुवादमा मूल तार बराबर थिए जहाँ, केही साइटहरु गूगल द्वारा अवरुद्ध भयो जब हुन्छ)
बढी सामान, यो readme.txt फाइल आफ्नो मित्र छ.